CSR Racing2APK အားဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » CSR ပြိုင်ပွဲ 2
CSR ပြိုင်ပွဲ2APK ကို
CSR ပြိုင်ပွဲ2- ယခု AR mode ကိုအတူအားလုံးအချိန် #1 ဆွဲပြိုင်ကားဂိမ်းများအတွက်နောကျအခနျး!
MAC ၏အစွန်းရောက်, "ကနှိပ်စက်တာဒီတော့အစစ်အမှန်"
"CSR ပြိုင်ပွဲ2အမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်" - GAMEZEBO
ကားတစ်စီးဂိမ်းဂရပ်ဖစ်အတွက်စံနှုန်းသစ်တခုချိန်ညှိခြင်း, CSR2 သင့်ရဲ့လက်ဖဝါးမှ Hyper-အစစ်အမှန်ဆွဲပြိုင်ကားကယ်တင်တတ်၏။ ဒီဂိမ်းကသင့်အိတ်ကပ်ထဲမှာကားတွေတစ်အခမ်းအနားပါ! ပြိုင်ပွဲဂိမ်းနိုင်အောင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ သင့်ရဲ့ကားများ Customize, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမားများဆန့်ကျင်ဆွဲပြိုင်ပွဲနှင့်မြို့အပေါ်မှာယူပါ!
1 နှင့်များစွာသောပိုပြီး: LaFerrari, McLaren P1 ™, Koenigsegg တစ်ခုမှာအပါအဝင်သင့်ရဲ့ထုံးစံ-built စူပါအတူကမ္ဘာကြီးကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကစားသမား, ဆန့်ကျင်တိုင်းရင်းသားများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ Tune နှင့်အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းအဘို့သင့်စီး customize နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယာဉ်အမှုထမ်းဖြစ်ရပ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်လွှမ်းမိုး။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်ကားများအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန်မှုလုပ်ကြ။ အခြားကားဂိမ်းယှဉ်ပြိုင်မပေးနိုငျသညျ! အခမဲ့အဆုံးစွန်ပြိုင်ကားဂိမ်း Download, သင့်စူပါစုဆောင်းမှုကိုစတင်ရန်နှင့်ယခုပြိုင်ကားရ!
အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအရှိဆုံးဒဏ္ဍာရီကားအချို့ပြန်လည်အသုံးပြုပုံကတော့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် McLaren F1 ပိုင်ဆိုင်၏ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခံထိုက်သက်သေပြ။ တစ်ဦး Saleen S7 အမွှာ Turbo, တစ်ဦး Lamborghini က Countach LP သို့ 5000 Quattrovalvole တစ် 1969 Pontiac GTO "ဒီတရားသူကြီး" သို့မဟုတ်တစ်ခု Aston Martin DB5 ၏ဘီးပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ရယူပါ။ Ferrari ပြိုင်ကား 250 GTO တစ်ခုသို့မဟုတ် Bugatti EB110 စူပါအားကစားအတွက်လက်ရာမြောက်သောအသေးစိတ်ခံစားပါ။ သင့်ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအိပ်မက်နှစျခြုမှ 16 ဒဏ္ဍာရီရှိပါသည်။ , သင့်ကားများ Customize အဆိုပါလမ်းကြောင်းမှသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြနှင့်အကောင်းဆုံးဆွဲပြိုင်ပွဲယာဉ်မောင်းတစ်ဝှမ်းသူသည်သက်သေပြဖို့!
NEXT ကို-GEN graphics
CSR2 သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်ကားတစ်စီးပြိုင်ကားဂိမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှထင်သောအရာကို redefines ။ နည်းစနစ် rendering ထူးချွန် 3D အသုံးပြုခြင်း, ဂိမ်းယနေ့အထိအလှဆုံးနှင့်စစ်မှန်စူပါပါရှိပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဂိမ်းကဒီထက်မဆိုပိုပြီးအစစ်အမှန်မရကြဘူး!
နောက်ဆုံးပေါ်, အကြီးမားဆုံး & အပူဆုံး CARS
သင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂိုဒေါင်ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာသူတို့ကိုပယ်ပြသနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏ပြိုင်ကားကားများနှင့်စူပါစုဆောင်း - CSR2 Ferrari ပြိုင်ကား, Porsche, Aston Martin, McLaren, Bugatti, Lamborghini က, Pagani နှင့်အပါအဝင်ကမ္ဘာ့အများဆုံးနှစ်လိုဖွယ်ကားတစ်စီးထုတ်လုပ်သူများထံမှ 200 တရားဝင်လိုင်စင်ရမော်တော်ယာဉ်များကျော်တပ်ဆင်ထား Koenigsegg ။ အဘယ်သူမျှမကအခြားပြိုင်ကားဂိမ်းနောက်ဆုံးပေါ်, အမြန်ဆုံးကားများကယ်မနှုတ်နိုင်။
ကမ္ဘာ့အတန်းအစားကားကို Configuration အတူရုံသငျသညျကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌အလိုတခုတည်းအဖြစ်, ဆေးသုတ်, ဘီးဝန်း, ဘရိတ် calipers နှင့်အတွင်းပိုင်းဖြတ်တောက်မှု၏ကျယ်ပြန့အတူမော်တော်ကားစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ , ဆေးသုတ်ကိစ္စ္စမှရွေးပါ decals နှင့်သင့်ကားတစ်စီး personalize ရန်သင့်လိုင်စင်ပြားကိုစိတ်ကြိုက်။ အခမဲ့အဘို့သင့်ကားများအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပြီးတော့လာမယ့်အဆင့်အထိသင့်ရဲ့လမ်းပေါ်ပြိုင်ကားသမားကိုရောက်စေဖို့အစွမ်းထက်အဆင့်မြှင့်သော့ဖွင့်!
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပြိုင်ပွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြတ်ပြီး Single-player ကိုလေယာဉ်အမှုထမ်းစစျပှဲအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ မွို့၌ထိပ်တန်းဆွဲပြိုင်ကားသမားတွေချေမှုန်းခြင်းဖြင့်လိုလားသူမှလူသစ်မှသင်၏လမ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်အပိုငွေဝင်ငွေ, သင်၏စီးဘို့အရှားပါးအခမဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုအနိုင်ရစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ်များအဘို့မျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ဖို့သတိရပါ။
REAL-TIME လမ်းပေါ်မှ Race
Real-time စိန်ခေါ်မှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ပြိုင်ပွဲနှင့်ယှဉ်ပြိုင်။ အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ, multiplayer ဆွဲပြိုင်ပွဲ၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုသက်သေပြ။ ထိပ်ပေါ်မှာအထဲကလာမှတစ်ဦးချင်းစီကားတစ်စီး၏ထူးခြားသောမောင်းနှင်မှုများနှင့်အချိန်ကိုက်ကျွမ်းကျင်။
AR MODE နဲ့သင့် CARS ချွတ်ပြ
တစ်ခုအံ့သြဖွယ်လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူဘဝကိုရန်သင့်ကားများကိုယူခဲ့! CSR2 ရဲ့ AR mode ကိုနောက်ကွယ်မှသည်အခြားကားတစ်စီးဂိမ်းများကိုရွက်။ ဤကားများတစျဦး၏ဘီးနောက်ကွယ်မှထိုင်ခြင်းနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေဖို့နဲ့တူရဲ့အဘယျသို့အတှေ့အကွုံ။ အဘယ်သူမျှမကအခြားကားတစ်စီးပြိုင်ကားဂိမ်းကိုသင်အမှန်တကယ် AR အတွေ့အကြုံကိုပေး!
ကားမောင်းသူရဲ့ထိုင်ခုံသို့တွန်းအပေါင်းတို့နှင့်အချိန် #1 အခမဲ့ဆွဲယူပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာတူ drop! CSR ပြိုင်ပွဲ2အခမဲ့ NOW က Download!
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! ဒီကားဂိမ်းကစားရန် 13 + ဖြစ်ရမည်။ CSR ပြိုင်ပွဲ2ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင် "ကန့်သတ်" မီနူးထဲမှာ on / off, ဤဝယ်ယူမှု toggle နိုင်ပါတယ်။
ကို Google ကနေခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝယ်ယူမှုတားဆီး "သတ်မှတ်မည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်း PIN ကို" ရွေးဖို့, ဆက်တင်များ menu ကို Play PIN ကိုဖန်တီး, ပြီးတော့ option ကို "ဝယ်ယူဘို့အသုံးပြုမှု PIN ကို" ဟုကို enable ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်တိုင်းငွေပေးငွေယူမီသငျ့ PIN နံပါတ်ရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: https://www.zynga.com/legal/terms-of-service
သီးသန့်ဖြန့်ချိ: Pagani Huayra Roadster ဘီစီ
အခုဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအရေးကြီးဆုံး hypercars တဦးသည် Pagani Huayra Roadster ဘီစီ၏မိတ်ဆက်မှာသီးသန့်ကြည့်ရ!
နယူးဖြစ်ရပ်များ: Pagani ကမ္ဘာ့ဖလားကို Premiere
ထူးခြားတဲ့ Pagani Zonda HP က Barchetta ဝင်ငွေမှတစ်ဦးက 80 ပြိုင်ပွဲလှေကားဖြစ်ရပ်!
Pagani Huayra ဘီစီ Roadster '' Launch Edition ကို ''
Pagani Huayra Roadster ဘီစီ '' Drago Viola Edition ကို ''
Pagani Zonda HP က Barchetta
1.76 GB ကို